कुन दलको कति सीट आउदै छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ अहिलेको पाटीको दावी - Muldhar Post
कुन दलको कति सीट आउदै छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ अहिलेको पाटीको दावी
२०७४, २३ कार्तिक बिहीबार 327 पटक हेरिएको
काठमाडाैं – निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूले जित-हारको चुनावी आकलन गर्न सुरु गरेका छन् । कांग्रेसले १०० सिट कटाउने र एमालेले ८७ सिट जित्ने दाबी गरेका छन् । यता माओवादी केन्द्र भने आन्तरिक रिपोर्ट पर्खंदै छ ।
यो खबर आजकोनयाँ पत्रिकाले लेखेको छ, संविधानसभाको ठूलो दल कांग्रेसले एक सयभन्दा बढी सिट जितेर फेरि पनि ठूलो दल बन्ने दाबी गरेको छ । उता, माओवादीसँग गठबन्धन गरेको एमालेले प्रत्यक्षतर्फ एक्लै स्पष्ट बहुमत ल्याउने दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका १६५ मध्ये ९६ सिटमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको एमालेले करिब ९० सिट जित्ने दाबी गरेको छ । माओवादी, फोरम र राजपालगायतले आन्तरिक सर्वेक्षण गर्दै छन् ।
तराई–मधेस र पूर्वी पहाडी जिल्लामा पकड रहेको संघीय समाजवादी फोरम तेस्रो शक्ति बन्ने गरी रणनीति बनाएर चुनाव प्रचारप्रसारमा लागिरहेको छ । पार्टी सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जितिने सिट संख्या तोकेरै भन्न नसके पनि तेस्रो शक्ति बन्ने रणनीतिका साथ प्रचारप्रसार गरिरहेको बताए । ‘प्रदेश नम्बर २ मा सरकार निर्माण गर्न बहुमत पुर्‍याउने र मुलुकभर प्रतिनिधिसभामा तेस्रो शक्ति हुने रणनीतिका साथ हामी प्रचारमा छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ठ्याक्कै यति सिट जित्छौँ त भन्न सकिन्न । तर, स्थानीय तहमा भन्दा नतिजा सुधारेर पार्टीलाई थप सशक्त बनाउने हाम्रो रणनीति हो ।’ फोरमले १७ र राजपाले १५ सिट लिने गरी प्रदेश नं. २ मा दुवै पार्टीले तालमेल गरेका छन् ।